I-Eid al - Adha konke ehlobene nayo
موضوع: I-Eid al - Adha konke ehlobene nayo الجمعة سبتمبر 01, 2017 7:52 pm
Eid al-Adha ewela 10 Dhu al-Hijjah, lapho izwe Muslim ugubha kulesi senzakalo wonke umhlaba, futhi ugijimela kuze 13 Dhu al-Hijjah, lapho ukuphela izihambeli imicikilisho yokusebenzelana phambi kwakhe ngosuku olulodwa, ezinsukwini zokugcina okungukuthi Hajj, lapho ukuphakama le mikhuba ku 9 Dhu al-Hijjah, okuyinto Abahamba ngezinyawo baya eNtabeni i-Arafat.
Izwe lamaSulumane ligubha ngokubambisana nalesi simiso kuleso sikhundla, kanye nezinsuku zokuqala zomkhosi, abahambeli abahlala khona e-Muna, banikela ngemihlatshelo ebusweni bukaNkulunkulu. Futhi nabo bonke amaSulumane abanamandla kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Kusuka lapha kwaba kwamagama leli holide Eid al-Adha, nokuthi udela ukuthi ezikhuluphalisiwe sekuhlatshiwe, wanikela inombolo umhlatshelo zibizwa Abrahama, imayelana ukuba abulale u-Ishmayeli indodana yakhe senanela isicelo kaNkulunkulu owakhulula u-Ishmayeli Bkpc umhlatshelo ebusweni kaNkulunkulu.
Imikhosi ye-Eid al-Adha iqala ngomkhuleko we-Eid ekuseni kusuku lokuqala lomkhosi wezinsuku ezine. Lo mthandazo kufanele wenziwe esontweni ngaphandle kweMosque, futhi kuvunyelwe emasikweni. Futhi, emva kokumthandaza, amaSulumane asakaza ukudela imihlatshelo yabo ngokuvumelana nevesi lama Qur'an: "Sikunikeza iKawthar, isahluko seNkosi yakho,
AmaSulumane esetshenziswa xhawula each nye njengoba masinyane njengoba they ukuqedela Eid imithandazo lapho yonke Muslim Muslim ethi ukuxhawula "UNkulunkulu wamukela kwethu nawe," futhi "njalo ngonyaka futhi wena esihle." Babevame ukuvakashela nokusekela izihlobo zabo. UJubair bin Nafir wathi: